कोरोनाको शंका लाग्यो ? घरमै बसेर यसरी गर्न सकिन्छ प्रारम्भिक परिक्षण !
‘सबैभन्दा ठूलो कुरा जनताको स्वास्थ्य नै खतरामा हुन्छ’
12th January, 2022 Wed ०८:५१:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । कोरोनाको तेस्रो लहरको बीचमा भारत सरकारले कसले कोरोना परीक्षण गराउने र कसले नगर्ने भन्ने नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ ।
अब यदि तपाईमा कोरोनाको लक्षण नदेखिएको र तपाई भर्खरै कोभिड पोजेटिभ भएको व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाले मात्र परीक्षण गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले परीक्षण गराउनु पर्दैन । तर, यदि तपाईलाई अर्को रोग छ र तपाईको उमेर ६० वर्षभन्दा माथि छ भने तपाईले कोरोना परीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ।
भारत सरकारको नयाँ दिशानिर्देशका अनुसार होम आइसोलेसनको दिन सकिएपछि वा अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदा वा एक राज्यबाट अर्को राज्यमा यात्रा गर्दा पनि कोभिड १९ परीक्षण गर्न आवश्यक छैन।
यता, दिनप्रतिदिन नयाँ नयाँ केस बढ्दै गएपछि घरमै टेस्ट किट ल्याएर कोरोना परीक्षण गर्नेको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यस्तै एउटा टेस्ट किट कम्पनी माइल्याब्सका प्रबन्ध निर्देशक हसमुख रावलले बीबीसीलाई भने कि डिसेम्बरको अन्त्यदेखि जनवरीको पहिलो सातासम्म घरमै कोभिड १९ परीक्षण गर्ने टेस्ट किटको बिक्री ४००-५०० प्रतिशतले बढेको छ ।
उल्लेखनीय छ, ‘भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषदले गत वर्ष मेको अन्त्यमा भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्बाट घरमै कोरोना परीक्षण गर्न स्वीकृति पाएको थियो। त्यसपछि कोरोनाको दोस्रो लहरको चरम सीमा लगभग सकिएको थियो । बजारमा त्यस्ता करिब सात वटा किट उपलब्ध छन् ।’
सरकारले किटको सही प्रयोगका लागि निर्देशन दिएको भए पनि अहिले धेरै विज्ञहरुले यसको प्रयोगमा समस्या आउने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
यो किट मार्फत घरमै बसेर कोरोना परीक्षण गर्न मानिसले पहिले गुगल प्लेस्टोर वा एप्पल स्टोरबाट घरेलु परीक्षणको जानकारी दिने मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुपर्छ । त्यसपछि यसमा आफूलाई दर्ता गर्नुहोस्।
परीक्षण किटमा स्वाब स्टिक, समाधान, परीक्षण कार्ड र परीक्षण कसरी गर्ने भन्ने पुस्तिका समावेश हुन्छ। पहिले स्वाब स्टिकको साथ नमूना लिनुहोस्, त्यसपछि समाधान भित्र नमूना मिश्रण गर्नुहोस्। पछि यसको एक थोपा परीक्षण कार्डमा राखिन्छ।
परीक्षा कार्डमा १५ मिनेटभित्र दुईवटा रातो रेखा सी र टी देखा परेमा नतिजा सकारात्मक मानिन्छ र एउटा रातो रेखा सी देखा परेमा नतिजा नकारात्मक मानिन्छ।
घरमै बसेर परीक्षा दिने सबैले मोबाइल फोनबाट एपमा परीक्षणको तस्बिर अपलोड गर्न अनिवार्य गरिएको छ । तर धेरैले परीक्षणको नतिजाबारे सरकारलाई जानकारी नदिई पनि टेस्ट किट प्रयोग गरिरहेका छन्।
यही कारणले गर्दा विज्ञहरूले नयाँ लहरको बीचमा दैनिक आउने नयाँ केसको संख्या वास्तविक संख्या नभएको अनुमान गरिरहेका छन् ।
तर, माइल्याब्सका प्रबन्ध निर्देशक हसमुख रावल भन्छन्, ‘आरटीपीसीआर परीक्षण पोजेटिभ आए पनि भारत सरकारले आइसोलेसनका नियमहरू पालना गर्ने भन्ने कुरा तपाईंको विवेकमा छाड्छ, जसरी होम टेस्ट किट बनाउने कम्पनीले पनि मान्छ। जनताले कोभिड नियमको कडाईका साथ पालना गर्ने र आफ्नो रिपोर्ट साइटमा अपलोड गर्ने भनेर गरिएको हो। हामीले प्याकेटमा पनि लेख्छौं र प्रचार सामग्री मार्फत जनतालाई जानकारी पनि दिन्छौं।’
दिल्लीको सफदरजंग अस्पतालको सामुदायिक चिकित्सा विभागका प्रमुख डा जुगल किशोरले टेस्ट किट प्रयोग गर्दा के-कस्ता समस्याहरू छन् भनी बताए।
डा किशोर भन्छन्, ‘यी परीक्षणहरू आरटीपीसीआर परीक्षण जस्तो सुनौलो मानकको परीक्षण होइनन्। घरमै परीक्षण गर्दा पोजेटिभ आएपछि मात्र मानिसमा तनाव बढ्छ। यसको कुनै क्लिनिकल फाइदा हुँदैन।’
प्राप्त गर्नुहोस्। र हरेक पटक सही रिपोर्ट आउँछ, यो पनि ग्यारेन्टी छैन। धेरै व्यक्तिले घरमै परीक्षण गरिरहेका छन्, परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएमा अपलोड गर्दैनन् र यसले गर्दा यस्ता केस ट्र्याकिङ र ट्रेसिङमा समस्या भइरहेको छ । जसका कारण सरकारले यति कडा बनाएको निगरानी प्रणाली कमजोर हुनेछ । जसका कारण पुरानो कोरोनाको स्थितिमा पुग्न सक्छौं ।
तर, यस्तो परीक्षण किटले व्यक्तिलाई आफ्नै परीक्षण गर्न सक्ने शक्ति दिने डा किशोरले पनि बताए । तर तिनीहरू एकसाथ जोड्छन् कि यो बीपी मेसिन हो वा थर्मोमिटरले शरीरको तापक्रम नाप्ने यी सबै आविष्कारहरूले मानिसहरूलाई अन्य तरिकामा मद्दत गरेको छ।
उनी भन्छन्, ‘जब जनस्वास्थ्यमा कुनै चीजको प्रयोगको स्वीकृति दिइन्छ गयो भने त्यसमा धेरै कुरा तौल्नु पर्ने हुन्छ । जनस्वास्थ्य सम्बन्धी निर्णयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्छ र जनताको पैसा लगानी हुन्छ र सबैभन्दा ठूलो कुरा जनताको स्वास्थ्य नै खतरामा हुन्छ ।’
यस प्रकारको गृह परीक्षण किटमा नकारात्मक नतिजा आएमा, यो परीक्षण गराउन सल्लाह दिइन्छ। तर सकारात्मक नतिजा आएमा रोगको गम्भिरता अनुसार अस्पताल वा घरमा आइसोलेसन गर्नु उचित हुन्छ ।
तर कतिपय डाक्टरहरु सस्तो दरमा यस्ता टेस्ट किटहरु सहजै उपलब्ध हुने भएकाले घरमै पोजेटिभ आएर अस्पताल भर्ना हुन खोजेकाले अस्पतालहरुमा पनि दबाब बढ्दै गएको चिकित्सक बताउँछन् ।
तर कतिपय डाक्टरहरूले यो टेस्ट किटलाई पनि राम्रो मान्छन्। डा सुनिला गर्ग सरकारको कोभिड टास्क फोर्सकी सदस्य पनि हुन् ।
उनी भन्छिन्, ‘अहिले मानिसहरूलाई परीक्षणका लागि लाइनमा बस्नु पर्दैन। धेरै पटक अस्पताल गएर परीक्षण गराउने क्रममा मानिसहरू कोरोनाको सिकार पनि हुन्छन्। यो किटले त्यो झन्झटको अन्त्य गर्छ। भार कम हुन्छ। स्वास्थ्य प्रणालीमा। र रिपोर्ट आउन धेरै दिन कुर्नुपर्दैन। लागत कम भएकाले फेरि परीक्षण गर्न कुनै समस्या छैन। ६ घण्टाको अन्तरालमा दुई पटक परीक्षण गर्न सकिन्छ।’
तर यो टेस्ट किट प्रयोग गरेपछि मानिसले नतिजा अपलोड नगर्ने भएकाले सही तथ्याङ्क सङ्कलनमा कठिनाइ बढ्न सक्ने डा सुनिलाको भनाइ छ ।
उनका अनुसार, ‘यसका लागि जनताले आफ्नो बानी परिवर्तन गर्नुपर्छ। सरकारले एक्लै सबै कुरा गर्न सक्दैन। कोभिड रोग हो, तर पनि जनताले यसलाई कलंक वा धब्बा मानेर लुकाउनुपर्छ, यो ठीक होइन। किट बेच्नको लागि।’ पसलहरू पनि राख्न सकिन्छ ताकि उनीहरूले मानिसहरूलाई कसरी उनीहरूको परीक्षण रिपोर्टहरू सजिलै अपलोड गर्न सक्छन् भनेर सचेत गराउँछन्।
पोजेटिभ देखिएलगत्तै अस्पतालमा भर्ना भएपछि उनी भन्छिन्, ‘यसको लागि घरेलु परीक्षण किट मात्र जिम्मेवार छैन, कोरोनाको उपचारमा सहज रूपमा बिमा उपलब्ध गराउनु पनि यसको पछाडि एउटा कारण हो । अस्पतालमा भर्ना धेरै र सरकारमा कम।’
सुनिला गर्ग भन्छिन्, ‘कोरोनाको तेस्रो लहर र ओमिक्रोनको खतराबीच तीन गुणा तिव्र गतिमा संक्रमण फैलिएको भनिएको छ, यस्तो अवस्थामा सबै पोजिटिभ केसको आरटीपीसीआर परीक्षण गर्दा पुरै प्रणाली नै ध्वस्त हुन सक्छ । अहिले भारतमा पनि यति ठूलो मात्रामा कोरोना परीक्षण गर्ने क्षमता छैन ।’
जसका कारण सरकारले परीक्षण र आइसोलेसनका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । घरमै बसेर कोरोना परीक्षण गर्दा कुनै हानि नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्, तर यसको सहि प्रयोग र अनावश्यक आत्तिनुपर्ने अवस्था भने छैन ।